Dadkii ka barakacay fatahaadda iyo colaadda Beledweyne oo ka cabanaya nolol xumo – Gedo Times
Dadkii ka barakacay fatahaadda iyo colaadda Beledweyne oo ka cabanaya nolol xumo
22nd May 2016 admin Wararka Maanta 0
Waxaa laga deyrinayaa xaaladda nololeed ee dadki ka barakacay fatahaadda iyo colaadda Beledweyne kuwaasoo ku dhibaateysan duleeddada magaaladaasi.
Qoysaska ka barakacay Beledweyne oo gaaray deegaannada Janta Kun dishe iyo Ceel jaalle ayaan heysan gabbaad ay galaan gabowga habeenki, dhibicda roobka iyo qoraxda maalinti, tiiyoo ay u sii dheertahay cunto la’aan.
Waxaa sii kordhaya qulqulka dadka ka barakacaya xaafadaha magaaladaasi, kaddib markii biyaha wabigu gaareen xaafado badan oo ka mid ah degmadaasi, inkastoo ay socdaan gurmad lagu soo saarayo dad weli ku go’doonsan guryahooda.
Qaar ka mid ah barakacayaashaasi oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa dalbaday in lala soo gaaro gurmad deg deg ah maaddaama ay ka barakaceen guryahoodii haatana ay ku suganyihiin meel banaan oo an laheyn waxyaabaha lagama maarmaanka u ah nolosha bani’aadamka.
Maamulka degmada Beledweyn iyo kan gobolka Hiiraan ayaa hore u dalbaday in loo soo gurmado dadkaasi barakacayaasha ah, iygoo tilmaamay iney wadaan dadaallo ay ugu gurmanayaan dadkaasi intii karaankooda ah.
Madaxweynaha oo soo saaray xeer lagu meel marinayo heshiiskii madasha watashiga+Dhageyso
MUUQAAL: Xiisad ka taagan Burco Iyo Maayarka oo ku Tilmaamay xil ka qaadistii mid riyo ah